Warkii.com-News and information about Somalia Inuusan Ka Maarmin Shah Rukh Khan , War Uma Haayo Hadalada Dadka Banaanka, Doorarka Uu Jecel Yahay Inuu U Sameeyo Filimaanta & Karan Johar Oo Ka Hadlay Waxyaabo Badan Oo Ku Saabsan Shaqsiyadiisa - Warkii.com-News and information about Somalia
Inuusan Ka Maarmin Shah Rukh Khan , War Uma Haayo Hadalada Dadka Banaanka, Doorarka Uu Jecel Yahay Inuu U Sameeyo Filimaanta & Karan Johar Oo Ka Hadlay Waxyaabo Badan Oo Ku Saabsan Shaqsiyadiisa
Director Karan Johar ayaa kasoo muquday shaashadaha Bollywood-ka waxaana uu jilaagaan sheegay inuu ku faanayo wax walba ee uu yahay sidoo kale waxaa uu sheegay inuu yahay soo saare mar walbane caawiya jilaayaasha isaga la shaqeeyaan.
Filimsameeyahaan ayaa inta kamid ah shaqsiyaadka lagu dhaleeceeyo inuu ku hoos noolyahay Shah Rukh Khan oo ah shaqsi wax badan ka saameyey Bollywood-ka.
Balse Karan Johar ayaa jawaabay waxaana uu sheegay inuu ku faanayo wax walba ee uu yahay shaqsi aragti iyo fikir wanaagsan , waxaana uu sheegay inuu mar walba ku faanayo la shaqeynta jilaayaasha caaanka ah.
‘’Marna kama xumaanayo wax walba oo la sheego, waxaan daraaasadeeyey waxyaabo badan , laakiin waan maqlaa hadala la sheego ee waxaan ku qanacsanahay inaan ahay shaqsi mar walba awood u leh waxa uu yahay.
‘’Waan ku faanayaa sababtoo ah waxaan ku faraxsanahay shaqada iyo magaca aan sameyey la shaqeynta shaqsiyaadka caanka ahna kama wal-walsani.
Sidoo kale Karan Johar ayaa la shaqeeya Ajay Devgan oo kamid ah jilaayaasha inta badan filimaanta taxaniyaasha sameeyaan.
Sidoo kale Karan Johar ayaa sheegay in laba door loo jilo filimaanta balse waxaa uu mar walba isaga jecel yahay inuu sameeyo filimaanta dhacdooyinka halkii uu dooran ahaa filimaanta dareen ximbaarsan.
‘’Waxaa jira laba nuuc oo loo sameeeyo doorarka filimaanta , balse dookheyga koowaad waa dhacdooyinka taxanaha ah.
Karan Johar ayaa guulo waa weyn ka gaaray Box Office-ka Bollywood-ka waxaana jira filimaan badan ee uu soo saaray kuwaas oo mar walba u diyaar ah inay saameeyn sameeyaan.